सावधान ! आजबाट घरबाहिर गल्लीमा पनि ननिस्कनु होला, पक्राउ परे कडा कारवाही हुने ! – Everest Pati
सावधान ! आजबाट घरबाहिर गल्लीमा पनि ननिस्कनु होला, पक्राउ परे कडा कारवाही हुने !
काठमाडौं उपत्यकामा लकडाउनमा थप कडाइ गरिने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ३ जेठबाट लागू हुने गरी लकडाउनमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो ।
शुक्रबार बसेको जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौंको बैठकले अत्यावश्यक सेवाका बाहेक पास विनाका सवारी साधन र पैदल यात्रुलाई समेत काठमाडौं प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौंका मूल सडक, भित्री सडक र गल्लीहरुमा विभिन्न बहानामा मानिसहरुको भीड लागेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले थप कडाइ गरेको हो । सडकमा विनापास निस्किएमा कानुनबमोजिम कारबाही हुने प्रशासनले जनाएको छ । गृह मन्त्रलायबाट प्राप्त निर्देशनअनुसार, शुक्रबार दिउँसो बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले मानिसको अनावश्यक भीड नियन्त्रण गर्न यो नियम लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि काठमाडौंका मूल सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रहरी लकडाउन कार्यान्वयमा खटिएको थियो ।
त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य प्रवेशद्वारमा रहेको चन्द्रागिरि नगरपालिकाले पाँच जनामा कोरोना परीक्षण रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएपछि लकडाउनलाई कडाइ गर्न लागेको छ ।
नगरपालिकाले सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बुमा ४८५ लाई गरेको पिसिआर परीक्षणमा पाँच जनाको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि लकडाउनलाई कडाइ गर्न लागेको हो । परीक्षण गरिएका ४८५ मध्ये ७२ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ । पोजेटिभ रिपोर्ट आएकामध्ये वडा नं ९ मच्छेगाउँका एक, वडा नं १ दहचोकका एक, वडा नं १२ बलम्बुका एक र दुई सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्यरत व्यक्ति रहेका छन् । सशस्त्रका दुईमध्ये एकजना अस्पतालमा कार्यरत र अर्को एकजना भक्तपुरको दुवाकोटमा बस्दै आएका थिए ।
‘आँचललाई गाली नगर्नु’ भन्दै पलले खुलाए विवाहमा नजानुको कारण (भिडियोसहित)